London:Daawo Taksiile soomaali ah oo gaarigiisa looga dhex 500.000 NOK, balse u celiyay dadkii lacagtaas lahaa. - NorSom News
Warbaahinta dalka U.K ayaa maalmihii ugu danbeeyay si aad ah u hadalheysay sheekada taksiile soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Gaageele, kaas oo baabuur uu watay looga dhex tagay lacag dhan 50 kun oo Yuuro, una dhiganta 500.000 NOK oo lacagta dalkan Norwey ah.
Gaagaale ayaa markii uu lacagta helay kadib, raadiyay dadkii ay ka kulantay isaga oo dib ugu celiyay.
Halkan ka daawo idaacada VOA oo arintaas warbixin ka diyaarisay(Daqiiqada 7-aad).
Previous articleShaqadan/waxbarashada qofkii ay anfaceyso u gudbi: Doctoral Researcher on Refugee Education: Building Durable Futures (REBuilD)
Next articleXoogsade: Tasteland: Muhiimadeena koowaad waa qancinta macaamiisha
(Video) Maamulka masjidka Towfiiq: Waa inaan ka qeybqaadano gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Muqdisho.
Keydka NorSom Velg måned august 2020 (5) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)